Olee Mgbe A Mụrụ Jizọs? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Assamese Australian Sign Language Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Greenlandic Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Hungarian Sign Language Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kachin Kikamba Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Moore Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Romanian Romanian Sign Language Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Umbundu Urdu Valencian Vietnamese Waray-Waray Welsh Xhosa Yoruba Zulu
Baịbụl ekwughị ụbọchị a mụrụ Jizọs. Lee ihe akwụkwọ ụfọdụ kwuru iji gosi na o kwughị ụbọchị a mụrụ ya:
“ A maghị ụbọchị a mụrụ Kraịst. ”—New Catholic Encyclopedia.
“ O nweghị onye ma kpọmkwem ụbọchị a mụrụ Kraịst. ”—Encyclopedia of Early Christianity.
Ọ bụ eziokwu na Baịbụl ekwughị ụbọchị a mụrụ Jizọs, ma o nwere ihe abụọ o kwuru mere n’oge a mụrụ Jizọs mere ọtụtụ ndị ji mata na ọ bụghị n’abalị iri abụọ na ise n’ọnwa Disemba ka a mụrụ ya.
A mụghị Jizọs n’oge oyi
Ideba aha n’akwụkwọ. Obere oge tupu a mụọ Jizọs, Siza Ọgọstọs nyere iwu “ ka e deba aha elu ụwa dum mmadụ bi n’akwụkwọ. ” Onye ọ bụla ga-aga “ n’obodo nke ya ” deba aha ya. Ihe a nwere ike ime ka ụfọdụ ndị gaa ije otu izu ma ọ bụ karịa iji gaa deba aha n’obodo ha. (Luk 2:1-3) Ọ ga-abụ na ihe Ọgọstọs bụ n’obi tie iwu a bụ ka e si na ya na-anata ndị mmadụ ụtụ isi nakwa ka esi na ya nweta ndị ga-abụ ndị agha. Ma, o nweghị onye obi ga-adị ụtọ ime ogologo njem a. N’ihi ya, o yighị ka Ọgọstọs ọ̀ ga-asị ka ndị mmadụ mee ụdị njem a n’oge oyi, n’ihi na ọ ma na ọ ga-emekwu ka iwe wee ha.
Ndị ọzụzụ atụrụ. N’oge a mụrụ Jizọs, ndị ọzụzụ atụrụ “ bi n’ọhịa. Ha na-eche ìgwè atụrụ ha nche n’abalị. ” (Luk 2:8) Otu akwụkwọ a na-akpọ Daily Life in the Time of Jesus kwuru na ndị ọzụzụ atụrụ na atụrụ ha na-anọ n’èzí “ n’izu bu ụzọ tupu izu Ememme Ngabiga [ya bụ, ná ngwụcha ọnwa Mach] ” ruo n’etiti ọnwa Nọvemba. O kwukwara na “ ha na-anọ n’ụlọ n’oge oyi; n’ihi ya, oge e ji agba Krismas, ya bụ n’oge oyi, agaghị abụ oge a mụrụ Jizọs, n’ihi na Akwụkwọ Nsọ sị na ndị ọzụzụ atụrụ nọ n’ọhịa n’oge ahụ. ”
N’ihe dị ka n’ọnwa Ọktoba
Ọ bụrụ na anyị ebido n’oge Jizọs nwụrụ, ya bụ, n’Ụbọchị Ememme Ngabiga na Naịsan 14, n’oge opupu ihe ubi afọ 33, gụrụ laa azụ, o nwere ike inyere anyị aka ịmata ọnwa ọ ga-abụ ya ka a mụrụ Jizọs. (Jọn 19:14-16) Jizọs dị afọ iri atọ mgbe o bidoro ikwusa ozi ọma. O zikwara ozi ọma afọ atọ na ọkara. N’ihi ya, ọ ga-abụ n’ihe dị ka n’ọnwa Ọktoba n’afọ 2 (Tupu Oge Ndị Kraịst) ka a mụrụ Jizọs.—Luk 3:23.
Gịnị mere e ji agba Krismas n’abalị iri abụọ na ise n’ọnwa Disemba?
Ebe ọ bụ na anyị ahụla na ọ bụghị n’abalị iri abụọ na ise nke ọnwa Disemba ka a mụrụ Jizọs Kraịst, gịnịzi mere ndị mmadụ ji agba Krismas n’oge ahụ? Otu akwụkwọ a na-akpọ Encyclopædia Britannica sịrị na ọ ga-abụ na ndị isi chọọchị họọrọ abalị iri abụọ na ise n’ọnwa Disemba “ ka o nwee ike ịdaba n’oge ndị Rom na-ekpere arụsị ji eme ememme ‘ụbọchị ọmụmụ anyanwụ ’” n’oge oyi. Akwụkwọ ọzọ a na-akpọ Encyclopedia Americana kwuru na ọtụtụ ndị gụrụ akwụkwọ sịrị na ihe mere ndị isi chọọchị ji họrọ ụbọchị ahụ bụ “ iji mee ka ndị ọgọ mmụọ a tọghatara ọhụrụ nwekwuo mmasị n’okpukperechi Ndị Kraịst. ”
Jizọs Oge Ezumike na Ememme Dị Iche Iche Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
Otú ihe isii a na-eme n’oge Krismas si bido nwere ike iju gị anya.
Ndịozi Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya, hà gbara Krismas?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Olee Mgbe A Mụrụ Jizọs?